Green N Kool: mampiaraka ny madio sy ny kanto | NewsMada
Green N Kool: mampiaraka ny madio sy ny kanto
Mandray andraikitra ho an’ny mpiara-belona. Iray amin’izany ny Green N Kool izay miasa eo amin’ny tontolon’ny fiarahamonina sy ny kolontsaina. Ao ireo tetikasa efa ataony, fa ao koa ireo eo an-dalampikarakarana.
Fikambanana iray manana ny foibe any Nosy-Be any ny Green N Kool. Miavaka ny tanjona napetrany : ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboahary, amin’ny alalan’ny asa mivantana eny anivon’ny fiarahamonina. Miara-dalana amin’izany ny fampivelarana ny zavakanto, toy ny fitrandrahana sy fampiasana ireo akora tsy ilaina intsony mba hamoahana sanganasa miavaka.
Tsy mijanona any Nosy-Be sy eto Antananarivo ny hetsiky ny Green N Kool fa misampana mankany amin’ny faritra samihafa, rehefa misy ny mpiara-miombona antoka. Any Nosy-Be, misy ny « Tsaiky maintso » na koa sekoly maintso, hanabeazana ireo ankizy, ao amin’ny tanànan’Antsatrabevoha, mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana.
Nanangana foibe ara-kolontsaina, ao amin’ny kartie Camp Vert, ao Nosy-Be, ihany koa ny fikambanana. Toerana hanomezana sehatra ny asa famoronana sy fampisehoana karazan-javakanto samihafa io. Misy ihany koa ny toerana ho an’ny fanentanana sy fanofanana mikasika ny lafiny sosialy sy ny tontolo iainana.
Ho an’ny eto Antananarivo, misongadina ny asa fanadiovana, izay antsoin’izy ireo hoe « Green attack », toy izay tontosain’ny fikambanana, isaky ny asabotsy, eny Anosibe. Mandray anjara amin’ny hetsika samihafa (« festival », foara, sns) ny Green N Kool ka mampianatra ny fomba fanivanana ireo kojakoja tsy ilaina intsony kanefa mbola azo ampiasaina amin’ny famoronana zavatra hafa. Amin’ireo asa rehetra ireo, misokatra amin’ny mpiara-miasa, vonona hanampy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampanajana ny fahadiovana, ny fikambanana.